‘कहिले हो २०२५ साल भन्या पुष्पकमल दाहाल ज्यू थाहा छ ? कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ?’ – Naulo News|online news|online news nepal
वैदेशिक रोजगारीः कोमामै छन् २५ नेपाली, स्वदेश फर्काउने पहल असफल
नेदरल्याण्डमा कफ्यूको उल्लंघन, झडपमा कयौं घाइते
Home/देश/‘कहिले हो २०२५ साल भन्या पुष्पकमल दाहाल ज्यू थाहा छ ? कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ?’
‘कहिले हो २०२५ साल भन्या पुष्पकमल दाहाल ज्यू थाहा छ ? कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो ?’
काठमाडौं, पुष २४ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालभन्दा आफू १० वर्षले राजनीतिमा जेठो भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार धनगढीमा आफ्नो समूहले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले राजनीति सुन्दा आफू संघर्षको मैदानमा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नभुयो, ‘आजकल पुष्पकमल दाहाल एउटै गीत गाउँदै हिड्नुहुन्छ । केपी ओलीले तीनवटा भोटा मैले बढी फटाको छु, पहिलो अध्यक्ष मलाई छोडिदिनुस् भन्नुभयो अनि मैले मानेँ भन्नुहुन्छ । तीनवटा भोटामात्र फटाको हो ?’
२०३८ सालमा दाहालले गोरखामा स्कुल पठाउँदा आफू आठ वर्ष जेल परेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले दाहालप्रति कटाक्ष गर्दै २०२५ सालको आन्दोलनमा गिरफ्ता पर्दा कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘३८ सालमा गोरखामा मास्टरी गर्दै हुनुहुथ्यो उहाँ, म आठ वर्ष जेल परिसक्या थिएँ । २७ सालमा मुद्दा लागेर जेल परिसक्या थिएँ, २६ सालमा अनेकपटक गिरफ्तार भएको थिएँ, २५ सालमा सुस्ता र महेशपुरका विषयमा आन्दोलन गर्दा गिरफ्तारमा पर्ने गरेको थिएँ । कहिले हो २०२५ साल भन्या पुष्पकमल दाहाल ज्यू थाहा छ ? कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुथ्यो ।’
नेपाली राजनीतिमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि प्रवृति परिवर्तन भएन-कलाकार हरिवंश आचार्य